Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » NASA na-enye nkwekọrịta ọmụmụ ihe bedrest na DLR
NASA ahọrọla Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt (DLR) nke Cologne, Germany, iji nye ihe owuwu ya iji kwado nyocha izu ike akwa ogologo oge.
Nkwekọrịta ihe ọmụmụ Bedrest nde $49.9 ga-akwado usoro ọmụmụ izu ike akwa n'ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị na Cologne, Germany. Enwere ike ịchọ ọrụ na ụlọ ọrụ NASA ndị ọzọ, ndị ọrụ ngo ma ọ bụ ebe ndị na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ahịa.
Nkwekọrịta ahụ na-enye ọrụ nkwado maka Health Health and Performance Directorate and Human Research Program (HRP) na NASA's Johnson Space Center na Houston. Agbanyeghị, NASA anaghị atụ anya mkpa ọ bụla ịkpọ maka ndị ọrụ afọ ofufo na US
Ọmụmụ ihe ndị HRP na-akwado ga-eji izu ike na-agbada isi ala dị ka ihe analọgụ maka ụfọdụ mgbanwe anụ ahụ nke ndị na-enyocha mbara igwe nwetara n'oge ụgbọ elu mbara igwe. Nchoputa a bu n'obi ịghọta nke ọma ma nyochaa usoro mgbochi maka ihe egwu dị na njem ụgbọ elu ogologo oge gụnyere ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, mmemme Artemis na Gateway.
"Isi isiokwu nyocha nke afọ a bụ ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ mgbe ha na-arụ ọrụ onwe ha site na njikwa ọrụ yana nkwado ụwa ndị ọzọ na ịdị irè nke usoro dị elu dị iche iche maka ịkwado ụdị ọrụ ndị a kwadoro," ka Brandon Vessey, ọkà mmụta sayensị na-eme nchọpụta kwuru. arụ ọrụ na ntinye n'ime HRP. "Nsonaazụ sitere na ọmụmụ ihe ndị a ga-enyere aka ịkọwa ka NASA na-ezube maka njem nyocha n'ọdịnihu mgbe ndị ọrụ mbara igwe ga-achọ ịrụ ọrụ n'adabereghị na Ụwa karịa ka ha na-eme na ọdụ ụgbọ elu International Space ugbu a na mbara ala dị ala."
Nkwekọrịta nnyefe na-adịghị agwụ agwụ / nke na-adịghị agwụ agwụ na iwu ọrụ akwụrụ ụgwọ, malitere Nov.